भारतमा शुरु दिनमै ५० करोड कमाउने पहिलो फिल्म बाहुबली « मेचीखबर
भारतमा शुरु दिनमै ५० करोड कमाउने पहिलो फिल्म बाहुबली
२७ असार २०७२, आईतवार १२:१४ मेचीखबर
एजेन्सी । गत शुक्रवार रिलीज भएको फिल्म ‘बाहुबली’ ले शरु दिनमै ५० करोड़ रुपैयाँ कलेक्शन गरेको छ । यो ओपनिङ्ग दिनमा सबैभन्दा बढी बक्स अफिसको कलेक्शन गर्ने भारतीय फिल्म बनेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्शले ट्वीट गरेर यो जानकारी दिइएको हो ।
फिल्म बाहुबलीलाई धेरै भाषामा रिलीज गरिएको छ । यी सबैलाई मिलाएर पहिलो दिनमै ५० करोड़ रुपैयाँ कमाई गरेको हो । हिन्दीमा यस फिल्मले छ करोड़ १५ लाखको कमाई गरेको छ । जुन कि हिन्दीमा डब कुनै पनि फिल्मले अहिलेसम्म यत्रो धेरै कमाई गरेको थिएन ।
यो फिल्मले शाहरुख खानको ‘हैप्पी न्यू ईयर’ को रेकोर्ड लाई पछि पार्दै उपलब्धि हासिल गरेको छ । २०१४ मा रिलीज एसआरके–दीपिका स्टारर फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ ले पहिलो दिन ४४.९७ करोड कलेक्शन गरेको थियो । ’
बाहुबली सबभन्दा महगो भारतीय फिल्म भनिदै आएको छ । यसमा शानदार स्पेशल इफेक्ट्सका प्रयोग गरिएको छ । केही जानकारहरु त यसलाई हलीउड मूवी ‘३००’ को भारतीय जवाब पनि भन्दै आएका छन् । फिल्मका डाइरेक्टर एस. एस. राजामौली छन् ।
राजामौली त्यहि डाइरेक्टर हुन् जुन २०१२ नेशनल अवार्ड जीती सकेर ईगा (मक्खी) लाई लिएर आएका थिए । फिल्ममा प्रभास, राणा दग्गुबती, तमन्ना भाटिया मुख्य भुमिकामा छन् ।